NAGU SAABSAN | georgedixonprimary
Ku Soo Dhawow Dugsigeena
Ku soo dhawoow boggeena internetka!
Dugsiga Hoose ee George Dixon, waxaanu ku faraxsanahay in aan soo dhaweyno carruurta ka socda adduunka oo dhan. Dugsigeena firfircoon waxaa lagu yaqaanaa bulshadeena si aan u noqono dugsi diirran oo daryeel leh oo aan la shaqeyneyno qoysaska si loo abuuro sifo heer sare ah oo raaxo leh oo lagu dhisay dhiirigelinta waxbarashada.
Waxaan dooneynaa inaan ka hortagno caruurteena inay noqdaan shaqsiyaad madax-bannaan, oo si wanaagsan u wareegaya, kuwaas oo qaata lahaanshaha waxbarashadooda oo noqdaan kuwo fekeraya qoto dheer. Waa muhiim in carruurtayadu awood u yeeshaan inay adeegsadaan aqoontooda iyo xirfadahooda ku jira mawduucyo badan oo iskuulka iyo nolosha dhabta ah. Waxaan horumarineynaa manhajkayaga si loo kobciyo xiisaha iyo hal-abuurka, iyada oo leh xiiso waxbarasho oo xiiso leh. Waxaa loogu talagalay inay carruurta siiso aqoonta aasaasiga ah, xirfadaha iyo fahamka inay u baahan yihiin inay diyaar u noqdaan heerkooda xiga ee barashada, muwaadiniinta Ingiriiska iyo adduunka ballaaran.
Waxan xooga saarnaa aragtida iyo fikradaha carruurta iyo in ay rumaysanyihiin in ay awood u leeyihiin caruurta inay noqdaan barayaal madax-bannaan oo saameeya go'aannada ku saabsan dugsigooda iyo waxbarashadooda. Golaha Dugsigeenu wuxuu la shaqeeyaa hoggaamiyayaasha dugsiga iyo guddoomiyeyaasha si ay u sii wataan horumarinta dugsigeenna.
Waxaan rajeynayaa inaad ka heli karto boggayaga internetka hab wax ku ool ah si aan u baranno dugsigayaga, waxaanan rajeyneynaa inaan si dhakhso ah kuugu kulanno.